I-CentOS Linux 8.4 isiyatholakala futhi lezi yizinguquko zayo | Kusuka kuLinux
Ngemuva kwezinyanga eziyi-8 zenguqulo yokugcina ekhishwe ukukhishwa kwe inguqulo entsha yokuvuselela yokusabalalisa I-CentOS 8.4 (2105) lapho kwenziwe izinguquko kusuka kuRed Hat Enterprise Linux 8.4. Leli gatsha leCentOS Linux 8 lizoqhubeka nokuthola izibuyekezo ezintsha kuze kube sekupheleni konyaka, okuzothi ngokuhamba kwesikhathi kuyekwe kuvunyelwe iRed Hat ukugxila kulezo zinsiza ku-CentOS Stream.
Futhi kungukuthi njengoba sesishilo lapha kubhulogi kuma-athikili ahlukahlukene, I-CentOS Stream izongena esikhundleni se-CentOS yakudala 8 ekupheleni konyaka, kungenzeka ukubuyela emuva kuzinguqulo zangaphambilini zephakeji usebenzisa umyalo "dnf downgrade", uma kunezinguqulo eziningana zohlelo olufanayo endaweni yokugcina izinto.
Umsebenzi wenziwe ukuhlanganisa amagama ezinqolobane (amakhosombe), ancishiselwa ezinhlamvwini ezincane (ngokwesibonelo, igama elithi "AppStream" lithathelwa indawo yi- "appstream"). Ukushintshela kuCentOS Stream, mane uguqule amagama amanye amafayela kumkhombandlela we /etc/yum.repos.d, uvuselele kabusha, bese ulungisa ukusetshenziswa kwamafulegi e - “-enablerepo” ne “–disablerepo” kumibhalo yakho.
1 Izici ezintsha eziyinhloko zeCentOS Linux 8.4
2 Landa i-CentOS 8.4
Izici ezintsha eziyinhloko zeCentOS Linux 8.4
Ngaphezu kwezici ezintsha ezethulwe ku-RHEL 8.4, okuqukethwe kwamaphakeji angama-34 kushintshile ku-CentOS 8.4 (2105), kufaka phakathi i-anaconda, i-dhcp, i-firefox, i-grub2, i-httpd, i-kernel, i-PackageKit, ne-yum. Izinguquko kumaphakeji zivame ukukhawulelwa ekubuyiseleni emuva nasekushintsheni umsebenzi wobuciko, kanye namaphakeji aqondene ne-RHEL afana ne-redhat- *, insights-client, ne-subscription-manager-migration * asusiwe.
Njengakwi-RHEL 8.4 ye I-CentOS 8.4, amamojula we-AppStream angeziwe akhiwa ngezinguqulo ezintsha I-Python 3.9, i-SWIG 4.0, i-Subversion 1.14, i-Redis 6, i-PostgreSQL 13, i-MariaDB 10.5, i-LLVM Toolset 11.0.0, i-Rust Toolset 1.49.0 ne-Go Toolset 1.15 .7.
I-iso iso lixazulula inkinga lapho umsebenzisi ephoqeleke ukufaka ngesandla i-URL yesibuko ukulanda amaphakheji. Enguqulweni entsha, isifaki manje sikhetha isibuko esiseduze kakhulu nomsebenzisi njengoba onjiniyela besho ukuthi kunethrafikhi encane kakhulu ebheke kumthombo we-CentOS RPM kuqhathaniswa
ama-RPM kanambambili, ngakho bakubheka njengokungafanele ukubeka lokhu okuqukethwe kusibuko esiyinhloko.
Uma abasebenzisi bafuna ukulingisa lokhu okuqukethwe, bangakwenza lokho besebenzisa umyalo wokuphinda uvumelanise kabusha otholakala kuphakeji yum / dnf-utils. Ama-RPM womthombo asayiniwe ngokhiye ofanayo osetshenziselwa ukusayina unambambili wabo.
Ukuvuselelwa okukhishwe kusukela ekukhishweni kokuqala kukhishwe kukonke izakhiwo. Sincoma kakhulu bonke abasebenzisi ukuthi basebenzise zonke izibuyekezo,
Mayelana nezinkinga ezaziwayo Kushiwo ukuthi lapho ufaka le nguqulo entsha yokuvuselela ku-VirtualBox, kufanele ukhethe imodi "Yeseva ene-GUI" bese usebenzisa i-VirtualBox engemdala kuno-6.1, 6.0.14 noma u-5.2.34, ngoba uma kungenjalo kuzoba nezinkinga.
Futhi, I-RHEL 8 iyekile ukuxhaswa kwamanye amadivayisi wehadiwe lokho kusengasebenza. Isixazululo kungaba ukusebenzisa i-centosplus kernel nezithombe ze-iso ezilungiselelwe iphrojekthi ye-ELRepo nabashayeli abengeziwe.
Inqubo ezenzakalelayo yokwengeza i-AppStream-Repo ayisebenzi uma usebenzisa i-boot.iso futhi efakwe ngaphezulu kwe-NFS ne-PackageKit ayikwazi ukuchaza okuguquguqukayo kwasendaweni kwe-DNF / YUM.
Landa i-CentOS 8.4
Ekugcineni kubo bonke labo abanesifiso sokukwazi ukufaka le nguqulo entsha yohlelo kufanele baye kuwebhusayithi yabo esemthethweni esigabeni sakho sokulanda ungathola isithombe sohlelo, isixhumanisi yilokhu. Lesi sithombe iyatholakala ukuthi uyisebenzise kunoma yimuphi umshini ophathekayo, kanye nakunoma isiphi esinye isicelo esivumela ukwenziwa kwemishini ebonakalayo, njengeVirtualBox noma iGnome Boxes.
Ukusatshalaliswa kuhambisana ngokuphelele ne-RHEL 8.4 ngakho-ke i-CentOS 2105 nokwakhiwa kwayo okulungele ukulanda noma isithombe se-8 GB DVD noma i-605 MB netboot ye-x86_64, Aarch64 (ARM64) kanye ne-ppc64le architectures.
Amaphakeji we-SRPMS lapho okususelwa kukho okubhaliwe kanye nolwazi lokulungisa amaphutha kuyatholakala nge isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-CentOS Linux 8.4 isiyatholakala futhi lezi yizinguquko zayo
UJami "Maloya" ufika ngokuthuthukiswa kwesixhumi esibonakalayo, ukuhlanganiswa kwamakhasimende kweWindows neLinux nokuningi